Ireo mpandika teny 3 tsara indrindra ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Isaky ny miala isika Tsangatsangana ary tsy mifehy fiteny tokony hananantsika isika malagasy eo an-tànana ary rakibolana inona no tsara kokoa noho ny iPad misy fifandraisana Internet. Efa nandalo fitsapana aho mpandika teny nandritra ny herinandro vitsivitsy ary hitako ireo fa ho ahy dia ireo 3 tsara indrindra amin'ny lafiny kalitao / vidiny. Maimaimpoana ireo mpandika teny izay nofidiko taorian'ny fitsambikinana ary mandeha tsara.
Tsy ilaina ny mandany vola amin'ny zavatra ataon'ny rindranasa maimaimpoana ary na dia somary tsara kokoa aza ny fangatahana karama, raha zavatra tadiavintsika dia zavatra mandeha tsara na dia misy zavatra tsy ampy aza, mandoa kely kokoa, Ity no ananantsika:
Mpandika teny Google
Mikasika ny kalitao / ny vidin'ity fampiharana ity dia eo amin'ny toerako laharana faha 3. Mazava fa mandika "tsara" ao anatin'ny zavatra mifanaraka aminy io. Saingy tsy nofidiko ho an'ny fandikana azy io fa satria ny Google Translate dia mamela antsika, ankoatry ny fandikana, mamerina ny dikanteninay amin'ny fiteny tadiavinay ary koa miaraka amina lantom-peony. Izy io dia rindranasa nataon'ny orinasa Google ary na dia maimaim-poana aza izany, ho ahy dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny resaka famokarana ilay nadika taminay fiteny samy hafa.
I iTranslate dia manana ny toerana faharoa amin'ny Top 3 ao amin'ny fampiharana fandikan-teny. Izy io dia manana endrika tsy lavorary miaraka amina background "hazo" ary varotra tsara App-In-Purchase. Na dia misy dokam-barotra vitsivitsy aza, azontsika esorina izany amin'ny alàlan'ny fandoavana € 1,79 ary ny tena tiako indrindra amin'ity rindranasa ity dia ny safidy «Fanekena ny feo»Izany, na dia mila mandoa € 2,70 ianao, manome antsika ny fahafaha-miteny izany ary mandika ho azy ny fampiharana izay lazainay handikana azy amin'ny fiteny hafa nefa tsy mila manoratra azy amin'ny tanana. Miasa ary afaka tanteraka ny fampiharana na dia eo aza ny fividianana mividy.
Mpandika teny matihanina
Ahitana izany fiteny 50 mahery ho an'iza no handika ny lahatsoratray na ny teninay. Ao amin'ny fividianana ao anaty rindrambaiko dia afaka mividy feo isika mba hahafahantsika mamerina izay tiana adika (teboka malemy io, satria Google Translate dia manafaka azy tanteraka). misy fehezan-teny maherin'ny 300 ary andian-teny nadika avy amin'ny matihanina ary misy izy ireo raha tsy misy fifandraisana Internet. Ho an'ireo fehezanteny ireo dia adika ivelan'ny Internet dia ao amin'ny Top 3 -ko ary miaraka amin'ireo fividianana ao anaty fampiharana sy ireo famolavolana mahavita mahatratra ny laharana 3 amin'ny laharako manokana.
Iza amin'ireo no ampiasainao? Ahoana ny hevitrao amin'ny safidiko?
Fanazavana fanampiny - Ny boky interactive "Los Amantes Pasajeros" dia azo jerena maimaimpoana ao amin'ny iBook Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ireo mpandika teny 3 tsara indrindra ho an'ny iPad
Natolotry ny mpampianatra an-dakilasy ho an'ny fiainana isan'andro, tsara kokoa ny mitazona rakibolana ofisialy ao amin'ny iBooks, manana atiny sy famaritana betsaka kokoa noho ny fampiharana rehetra izy ireo
Mety ho vahaolana ihany koa izany
Raha fintinina, tsy misy mpandresy. Manana ny mpandika teny faharoa izahay sy mpandika teny Google ary mpandika teny matihanina amin'ny laharana faha-3, fampitahana tsaratsara kokoa…
Jordi, raha tsy mametraka mpandresy aho dia satria ao amin'ny App Store dia tsy misy fampiharana maharesy lahatra ahy.
Azo antoka fa ny laharana 1 dia mandeha any amin'ny iBooks misy rakibolana.
Flip Clock ho an'ny Center Notification: famantaranandro ho an'ny ivotoerana fampandrenesana (Cydia)
Flashlight, fampiharana iray hafa hampiasa ny LED an'ny iPhone ho jiro